सरकारी निर्णय त यस्तो पो हुनुपर्दछ ? – Rastriya Yuvajagaran News
सरकारी निर्णय त यस्तो पो हुनुपर्दछ ?
३ श्रावण २०७६, शुक्रबार १९:५०01
म्युनिख। जर्मनीको सरकारले बालबालिकाको सुरक्षाको लागि नयाँ पहल थालेको छ । चान्सलर एन्जेला मोर्केलको प्रशासनले संसदमा एक विधेयक पेश गरेको छ । यो विधेयक अनुसार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नुभन्दा पहिले मातापिताले उनीहरुलाई सबै खोप लगाइसकेको हुनुपर्नेछ । यस्तो नभएमा २ हजार ५ सय युरो (३ लाख ८ हजार नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
यदि यो विधेयक पारित भएमा अब मातापिताले बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्दा उनीहरुको खोप प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र बालबालिकालाई स्कुल जाने अनुमति दिइनेछ । जर्मनीका स्वास्थ्य मन्त्री जेन्स स्पाह्नका अनुसार सरकारको लक्ष्य बालबालिकालाई घातक रोगबाट बचाउनु हो ।
युरोपमा बालबालिकाहरुमा मिजल्स रोग तीव्र रुपमा फैलिइरहेको छ । जर्मनीमा हालत चिन्ताजनक छ । अघिल्लो वर्षको मार्चदेखि यो वर्षको फेब्रुअरीसम्म जर्मनीमा मिजल्सका ६५१ घटना सार्वजनिक भएका थिए । तर, त्यसपछिका ४ महिनामा ४२९ जनामा मिजल्स देखियो । अर्थात जर्मनीमा यो समस्या तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । मिजल्स एक मानिसबाट अर्कोमा हावाको माध्यमबाट फैलिन्छ ।
बालबालिकालाई यसका कारण कडा ज्वरो, खोकी र सुन्निने समस्या हुन्छन् । यसअघि इटली सरकारले पनि खोप अनिवार्य गरेको छ । प्रशासनले मातापितालाई बालबालिकालाई खोप नलगाएको भए स्कुल नपठाउन चेतावनी दिएको थियो । इटलीमा खोप नलगाएका बालबालिका स्कुलमा भेटिए ५०० युरो जरिवाना तिर्नुपर्छ ।
Related tags : khop ma jariwana. Munik
अवैध बसेका श्रीलंकाका नागरिकलाई देश निकाला
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै घट्यो तर रेमिट्यान्स भित्रिने अवस्था उस्तै
यो खबर हेर्नुहोला । : "सरकारी निर्णय त यस्तो पो हुनुपर्दछ ?". यहाँ लिन्क छ : https://yuvajagaran.net/?p=18539. Thank you